यसरी सामान बोक्न पाइदैन, के हेर्दैछ ट्राफिक ? (फोटो फिचर) – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ फाल्गुन ३ गते शुक्रबार १७:०७ मा प्रकाशित
पाेखरा, ताण्डव न्युज ।
रत्नचोकबाट रमेश अधिकारी सिर्जनाचोक मेट्रोसिटी अस्पताल तर्फ मोटरसाइकमा आउँदै थिए । विहीबार उनी विरामी भेट्न जादा दुर्घटनामा परे । सिर्जना चोकबाट राष्ट्रबैंक चोक तर्फ जादै गरेको मोटरसाइकको कारण उनको दुर्घटना भयो ।
राष्ट्रबैंक चोक जादै गरेको उक्त मोटरसाइकल पछाडी सवार व्यक्तिले होडिङ बोर्ड बोकेका थिए । त्यही होडिङ बोर्डको भागले दाहिने हातमा लागेपछि रमेशको बाईक अनियन्त्रित भएर सडकमा ढल्न पुग्यो ।
ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको रमेशले ताण्डव न्युजसँग बताए । ‘धन्न अगाडी पछाडीबाट गाडी आएको थिएन, नत्र मलाई किल्चिएर जान्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसरी मोटरसाइकलमा त्यत्रो ठूलो बोर्डपनि कसैले बोग्छन त ? एउटा बसले ओगटेको ठाउँमा भन्दा धेरै भाग ओगटेको थियो, अनि दुर्घटना हुदैन त ?’ सो बाइक पछाडी बस्ने मान्छेको देब्रे खुट्टा भाँचिएको उनले सुनाए ।
बगर ट्यासी चोक नजिक पनि यस्तै कारणले दुर्घटना भयो ।
मोटर साईकल पछाडी बसेर बोकेको फलामले पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा विए दोस्रो बर्षमा पढ्ने रमिला विकलाई ठक्कर दिँदा निधारमा दुई वटा टाँका लगाउनु प¥यो । तर्किदा–तर्किदै चोट लागेको विकले सुनाइन् । ‘बाईकमा बोकेर आएको देखेको थिएँ, तर्किदा–तर्किदै लामो फलामले लागिहाल्यो,’ उनले भनिन्, ‘धन्न आँखा फुटेन । मोटरसाईकलवालाले माफ माग्दै उपचार गरिदियो ।’
मोटरसाईकलमा अनावश्यक सामान बोक्न नमिल्ने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख तथा ईन्स्पेक्टर मुरारी मिश्रले बताए । ‘मोटरसाईकलमा दुई जना भन्दा धेरै सवारी हुनै पाइदैन्,’ उनले भने, ‘अनावश्यक रुपले सामान बोकेको पाईएमा तुरुन्तै कारवाही हुन्छ ।’ यसरी अनावश्यक सामान बोकेर हिड्नेलाई पनि कारवाही गरिएको उनले सुनाए ।
‘देखेसम्म हामीले कारवाही गरेका छौ,’ उनले भने, ‘यतिसम्मकी मोटरसाईकल पछाडी बसेर नाम्लो लगाएर बोकेको पनि भेटियो । मोटरसाईकल मात्र होइन चार पांग्रो सवारीले पनि आवश्यक भन्दा धेरै समान बोक्न पाउँदैन् ।’
कास्कीः बिरामी बोकेको एम्बुलेन्समाथि पहिरो, बिरामीको बाटैमा मृत्यु
पेस्ताेल देखाएर आतंक मच्चाउने बन्दीपुरका ‘अशोक गुरुङ’ वन्यजन्तु सामग्री र…